Madaxweynayaasha Galmudug & Hir-Shabeelle oo Ciidamada ugu baaqay ka hortegida weerarada Al-Shabaab | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweynayaasha Galmudug & Hir-Shabeelle oo Ciidamada ugu baaqay ka hortegida weerarada Al-Shabaab
Madaxweynayaasha Galmudug & Hir-Shabeelle oo Ciidamada ugu baaqay ka hortegida weerarada Al-Shabaab
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ugu hambalyeeyay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo u dabaal degaya sanadguuradii 62-aad ee kasoo wareegtay aas aaskii Ciidanka Xoogga Dalka ee 1960-kii.
Madaxwaynaha ayaa Saraakiisha, Saraakiil Xigeenada, Alifleyda, Dableyda iyo Qoysaskooda ugu hambalyeeyay Munaasabadaan waxa uuna la wadaagay inay xoojiyaan difaaca dalka iyo hortagga kooxaha aragixisada ah.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay yihiin Astaan Qaran oo u taagan difaaca iyo haybada Qaranimada Dalka, isagoo bogaadiyay howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dhinaca kale Madaxwaynaha Dowladda Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye, ayaa hambalyo udiray Ciidanka Xoogga Dalka, isagoona ugu hambalyeeyay munaasabadda 12 April oo ah markii la aasaasay Ciidanka Xoogga Dalka 1960-kii oo ay kasoo wareegtay 62 sano.
Ugu dambeyntii, Madaxwaynaha ayaa ku ammaanay Ciidamada sida nafti hurnimada leh oo ay goor iyo goobkasta cadowga uga difaacaan dalka, asagoona ku dhiirigeliyay in ciidanku ay sii laba jibaaraan dadaalada iyo howlgallada amniga lagu sugaayo.
Previous articleFarmaajo” Hadii aan nahay wadaniyiin mideysan waan ka adkaan laheyn Al-Shabaab”
Next articleWaddooyinka qaar ee Muqdisho oo xiran & dabaaldeg ka socda